Wararka – Page 23 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhurnimo Talaado ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 16-04. 2019
War Deg Deg:-Ganacsade Lagu Dilay Magaaladda Muqdisho
Wararka ka imaanaya Suuqa Bacaad Degmadda Yaaqshid ee Gobolka banaadir ayaa ku waramaya in halkaas lagu dilay Nin Ganacsade ahaa. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal dilkaan ayaa ka dhacay Suuq Qandalaha,waxaana fuliyay rag hubeysnaa oo saarnaa Mooto Bajaaj. Goobjoogayaasha ayaa sidoo kale sheegay in dhowr xabadood lala dhacay Ganacsadaha,islamarkaana ragga hubeysnaa ay goobta ka baxsadeen. Lama oga sababta ka dambeysay ...
Askari Muqdisho Ku Dilay Nin Toorey Ku Dhaawacay Askar Kale!!
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya askari ka tirsan Ciidamadda Dowladda Soomaaliya oo barqanimadii maanta qof shacab ahaa ku dilay Isgoyska Sanca ee Magaalada Muqdisho. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal, ninka la dilay ayaa Mindi (Toorey), ula soo baxay askar ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa Isgoyska Sanca. Ninka tooreyda ku hubeysnaa ayaa dhaawacay labo askari oo ka ...
Safaaradda Soomaliya ee Koonfur Afrika oo Balanqaad u Sameysay Soomaalida Dalkaas
Danjiraha Safaarada Soomaaliya ee Dalka koofur afrika Jamaal Maxamed Barrow ayaa waxaa uu Magaalada Cape town kula Kulmay Qaar kamid ah Ganacsatada Soomaaliyeed ee Magaaladaasi, kuwaasi oo goobahoodi ganacsi Bililiqo iyo Boob ay u geysteen dadka deegaanka ee Xaafadaha Nomzamo iyo Lwanda oo ku yaala Tuulada Strand oo ka mid ah Magaalada Cape town. Safiirka ayaa waxaa uu Booqday goobihii ...
Maamulka Hirshabelle ayaa ka hor yimid go’aano kasoo baxay shir ay Magaaladda muqdisho ku qabatay Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya. Qoraal kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Hir-shabeelle ayaa lagu qaadacay go’aanadda kasoo baxay shirka ka dhacay Muqdisho. “Maanta oo ay taariikhdu tahay 15ka bisha Abril, 2019. Waxaa ka soo baxay wasaarada Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka ee Dowladda Federaarka ah, ...
C/qaadir Maxamed Xuseen (Dhaashoow), oo Lagu Dilay Degmadda Kaaraan
Kooxo hubeysnaa ayaa xalay Degmadda kaaraan ee Gobolka banaadir waxa ay ku dileen wiil dhalinyaro ahaa oo si weyn loogu yaqaanay degmadda. Dilkaan ayaa ka dhacay Maqaayadd ku dhow Saldhiga Degmadda Kaaraan,waxaana fuliyay dhalinyaro bastooladdo ku hubeysnaa. Wiilka dhalinyaro ahaa ee la dilay ayaa lagu magacaabi jirey C/qaadir Maxamed Xuseen (dhaashoow),wuxuuna kamid ah dhalinyaradda degmadda. Qof kamid ah dadka deegaanka ...
Mareykanka oo Xaqiijiyay in Duqeyn Lagu Dilay Ku-xigeenka Hogaamiyaha Daacish
Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay duqeyn diyaaradaheeda duuliyaha aan la laheyn ay ka fuliyeen Deeganadda maamulka Puntland. Qoraal kasoo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda afrika (AFRIKOM), ayaa lagu sheegay duqeynta oo dhacday 14-kii bishaan in lagu dilay Ku-xigeenkii Hogamiyaha Kooxda Daacish-ta Soomaaliya C/Kariin Dhuqub. Madaxa Howlgalka Mareykanka ee Afrika Gregg Olson, ayaa sheegay in duqeynta ay si wadajir ay u ...
Faah-faahin:-Qarax iyo Dil Ka Dhacay Magaaladda Muqdisho
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax iyo dil ka dhacay magaalada muqdisho ee Caasimadda Soomalia. Qarax Miino oo dhulka lagu aasay ayaa galabnimadii maanta ka dhacay nawaaxiga xero Shiino oo u dhow Xeradii hore ee Shiirkole Magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaan ku dhintay wiil dhalinyaro ahaa oo ardey ahaa,waxaa sidoo kale ku dhaawacamay qof kale. Ciidamadda amaanka ...
Qaar kamid ah xubnaha garsoorka dowladd goboleedka Gal-Mudug oo ku sugan magaalada Cadaado ayaa ka cabanayo mushaar la’aan heysato muddo ka badan 2 sano. Gal-Mudug waxaa hadda jira muran aad u fara badan iyo maamulo is dhinac socdo oo kala maamulo qaar kamid ah deegaanada iyo degmooyinka Dowladd Gal-Mudug. Sheikh Maxamed Guuleed Keynaan oo sheegtay inuu xubin ka yahay waaxda ...
Hey’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay dhawaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in 31% uu hoos dhacay fulinta xukunada dilalka toogashada ah ee waddamada caalamka, marka laga reebo Shiinaha. Marka xisaabta laga reebo dalka Shiinaha, qiyaasta tirada dadka xukunada dilka ah lagu fuliyey sanadkii hore ee 2018 ayaa gaareyso 690 qof, waxa ayna tiradaas ...
Page 23 of 1,789« First...1020«2122232425	»	304050...Last »